Nei infographics Yakakurumbira? Zano: Zvemukati, Kutsvaga, Zvemagariro, uye Shanduko! | Martech Zone
Vazhinji venyu munoshanyira bhurogu yedu nekuda kwekushingirira kusimba kwandinoisa mukugovana kushambadzira infographics. Zvichitaurwa zviri nyore… ndinovada uye vanozivikanwa zvakanyanya. Pane zvikonzero zvinoverengeka nei infographics ichishanda kwazvo kumabhizinesi 'madhijitari ekushambadzira matangi:
zvekuona nemeso - Hafu yehuropi hwedu yakazvipira pakuona uye 90% yeruzivo rwatinochengetedza inoonekwa. Mifananidzo, mairafu, uye mapikicha zvese zvine mutsindo masvikiro ekutaurirana nawo kumutengi wako. 65% yehuwandu vadzidzi vanoona.
ndangariro - Zvidzidzo zvakawana kuti, mushure memazuva matatu, mushandisi akachengeta chete 10-20% yeruzivo rwakanyorwa kana kutaurwa asi ingangoita 65% yeruzivo rwekuona.
kufamba - Uropi hunogona kuona mifananidzo inogara kwema 13 millisecond chete uye maziso edu anogona kunyoresa mamirioni makumi matatu nemazana matatu ekuona paawa. Tinogona kuwana pfungwa ye zvinoonekwa mune isingasviki 1/10 yechipiri uye zvinoonekwa zviri yakagadziriswa 60,000X nekukurumidza muuropi kupfuura zvinyorwa.
kutsvaka - Nekuti infographic inowanzo kuve nemufananidzo mumwe chete uri nyore kutsikisa nekugovana muwebhu yese, ivo vanogadzira backlinks iyo inowedzera mukurumbira uye, pakupedzisira, chinzvimbo cheiyo peji iwe yaunoburitsa pairi.
Tsanangudzo - Iyo yakagadzirirwa-yakagadzirirwa infographic inogona kutora yakaoma kwazvo kubata uye kuitsanangura nemaziso kune muverengi. Ndiwo mutsauko pakati pekutora rondedzero yenzira uye kunyatso kuona mepu yenzira.
mirayiro - Vanhu vanoteedzera mafambiro nemifananidzo vanovaita 323% zvirinani pane vanhu vanotevera vasina mifananidzo. Isu tiri vadzidzi vanoona!
branding - Iyo yakagadzirirwa-yakagadzirirwa infographic inosanganisira iyo yekumaka yebhizimusi iyo yakaigadzira, kuvaka chiratidzo chechiratidzo chesangano rako rakatenderedza webhu pane akakodzera masosi ayo akagovaniswa pairi.
kupana nduma - Yakanaka infographic ine zvakawanda zvinokwezva kupfuura bhurocha remavara. Vanhu vanowanzo tarisa zvinyorwa asi vachinyatso tarisa kwavo pane zvinoonekwa mukati mechinyorwa, zvichipa mukana wakanaka wekuvhenekesa neiyo yakanaka infographic.
Kugara-Nguva - Vashanyi vanosiya yako saiti vanowanzo siya mukati memasekonzi 2-4. Nenguva pfupi yakadaro yekunyengetedza vashanyi kuti vatenderedze, zvinoonekwa uye infographics iri nani sarudzo yekubata maziso avo.
Kugovana - Mifananidzo yakagovaniswa pasocial media zvakanyanya kupfuura zvinyorwa zvinyorwa. Infographics inofarirwa uye inogovaniswa pasocial media Times 3 times kupfuura chero imwe mhando yezvinyorwa.
Kudzokorora - Vashambadziri vanogadzira yakakura infographic vanogona kumisazve iwo maficha emasiraidhi mune avo ekutengesa mharidzo, nyaya dzenyaya, machena mapepa, kana kutombozvishandisa iwo hwaro hweiyo inotsanangudza vhidhiyo.
Kutendeuka - Yese huru infographic inofamba iye munhu kuburikidza nepfungwa uye inobatsira kuvatyaira kune yekufona-kune-chiito. B2B vatengesi vanonyatsoda infographics nekuti vanogona kupa dambudziko, mhinduro, mutsauko wavo, manhamba, zvipupuriro, uye kushevedza-kuzviita vese mune mumwe mufananidzo!
Zvakare nekuvandudza yangu yega infographics yeyangu saiti uye yangu vatengi, ini ndinogara ndichitsvaga padandemutande ndichitsvaga infographics yekuisa mune zvangu zvemukati. Iwe unogona kushamiswa nemabatiro aunoita zvemukati neumwe munhu infographic pane yako chinyorwa ... uye izvo zvinosanganisira kana iwe uchibatanidza kudzokera kwavari (izvo zvaunofanira kugara uchifanira).
Yangu yazvino infographic yakaunzwa kune mutengi yaive infographic pane apo vacheche vanowana mazino avo kune chiremba wemazino anoshandira vana muIndipolis. Iyo infographic ndeye yakakunda hit uye yepamusoro peji yekuenda parizvino pane yavo saiti, iine inopfuura hafu yevose vanoshanya pane yavo ichangotangwa saiti.
udza mashoko Highbridge kune Infographic Quote
Tags: kutendeukamirayirokugara nguvaKubatanatsanangudzomufananidzoinfo graphicinfographic nhambakufambiswa kwemashokoruzivo ruzivoKushambadzira InfographicsndangarirokudzokororaSearch Engine Optimizationseokugoveranazvekuona nemesokudzidza kunoonekwa
Ndinofanira kuda basa rose rinopinda mavari, asi kuongorora kunogona kubatsira.
"peek kutsvaga kufarira" ?????
Hi Douglas. Ndinoda chinyorwa chako! Mazhinji ezviverengero zvinonakidza nezve ichi chinowedzera mukurumbira chishandiso chekuona data. Ini handina kukwanisa kufunga nzira iri nani yekuratidza kugona kwe infographics pane kushandisa imwe. Ini ndaivimba nechidimbu chako chemukati kunyora chinyorwa changu paMedium, pandinokureva. Ndafunga kuti unoda kutsanangura: https://medium.com/inbound-marketing-clinic-at-nyu/61033a96ea78. Karinne
Muunganidzwa wakakura we infographics! Ini ndinongofarira kuwana nyaya yese pasina kushandisa chinhu kunze kwemifananidzo. Izvo zvakanaka zvinonakidza. Vari kukura mukushandiswa ndicho chokwadi!
Gumiguru 18, 2015 pa 11:38 AM
Ndaida mashoko aya ose ebasa rangu kuchikoro. Ruzivo rwakanaka kwazvo,
Uye nenzira kana uri kushamisika kuti ndine makore mangani, ndine gumi nerimwe chete uye ini ndinotoda ruzivo urwu zvakanyanya. Basa rakanaka, Mr Douglas!!!!!!!!!!!!!
Gumiguru 18, 2015 na5: 50 PM
Ndizvo zvakanakisa Amalshah! Ndatenda nechinyorwa… une basa rakajeka pamberi pako.